2 aasaasiga ah Siyaabaha View PowerPoint on iPhone 4s
> Resource > iPhone > Sida loo Play PPT on iPhone 4s
Waxaa la yaab leh in iPhone - ama iPhone 4s cusub - oofin karin runtii sida PC awood leh. Taas macnaheedu waa in sokow ka eegay internetka, sawiro iyo qaadashada ciyaaro - files arkaysid la oggol yahay. Dabcan, markii aannu u nidhaahno "file" tani ma dabooli PDF, EPUB ama eBooks kale. Halkan "file" waxa loola jeedaa PowerPoint, Word, Excel ama faylasha iyo maalin kale.
In kastoo laftiisa iPhone ma taageeraan files kor ku xusan, haddii aad rabto in aad u shaqeeyaan, waxaa jira siyaabo si ay u dhacaan. In this article, waxaana dooneynaa in ay ka hadlaan laba siyaabood oo aasaasi ah u ciyaaro PowerPoint on iPhone. Ok, aynu aad u bilowdo.
Beddelaan PPT si PDF u iPhone Sida aan soo sheegay in iPhone (iPhone 4s) ma taageeri PowerPoint, laakiin PDF files, si doorasho hore diinta PPT si PDF u iPhone. Waa sahlan oo soo jiidasho leh si ay u helaan waxa ay u yeeleen tan iyo Microsoft PowerPoint ayaa la siiyaa ikhtiyaar aad u. Fur aad PowerPoint, riix badhanka Xafiiska ee bidixda xagga kore ee suuqa oo uu dedeg AS badbaadi> Hel dar-tago u qaabab kale file. Ka dib markii in aad arki doonaa "ayuu Save sida PDF ama XPS dar-in" page. Markaasay aad u baahan tahay si ay u soo baxdo iyo rakibi ku add-in. Ka dib markii in, aad ku sawirnaa button Xafiiska, Save PowerPoint sida Adobe PDF u iPhone.
Waa lacag la'aan, laakiin ma ahan habboon in la akhriyo PDF file. Waa in aad qirto in inkastoo iPhone iBooks ku lifaaqan akhriyi kari waayeen PDF soo xerooto, bandhigay yar ka dhigaysa in ay adag tahay in la akhriyo file PDF ah. Waa in aad jiidi PDF oo ku haboon shaashadda si joogto ah.
Beddelaan PPT si socon video iPhone Video bandhigay waa ka sii toos ah oo uu tashiilo waqtiga. Si aad videos ka PowerPoint u iPhone, waxaad isticmaali kartaa Wondershare PPT2Video Pro . Waxay awood u aad si loogu badalo PowerPoint si iPhone in 3 tallaabo.
1. Daahfurka PPT2Video Pro dooro Abuur Video Faylal ay ka PowerPoint . Markaasuu ku-up pop, guji Add inay dajiyaan files PPT iyo riix Next
2. In Settings ah, doortaan MP4 sida qaab wax soo saarka
3. In dhoofinta, riix Start .
Bingo! Taasi waa! Waxaad u dhigay. Ka dib marka aad badalo PPT si iPhone qaab socon, mar dambe ma aad u baahan tahay inaad jiidi files si haboon on iPhone. Laakiin khasaare kaliya ee waa in aad u baahan tahay inaad bixiso PPT2Video Pro ah.